250W ~ 1100W Paompy ao anaty rano madio plastika
250W ~ 1100W Paompy ao anaty rano madio plastika misy rano: Ningbo, ChinaFuzhou, Sina Fotoana fitarihana: 25 ~ 30 Andro30 ~ 45 Andro aloa: T / TL / C
FIZARANA MOTOR FITEHIRIZAM-BOKIN'NY HERINANDRO: H63-H250 Vidim-pahefana vy: 0.18KW - 55KW (50hz / 60Hz) Fahombiazan'ny IE1. TOSIKARATRA: 220 / 380V 、 380 / 660V 、 230 / 400V 、 400 / 690V （Misy namboarina） Misy naoty avoakan'ny vokatra sy ny haben'ny endriny mifanaraka amin'ny fenitra IEC60034. Fitaovana an-trano: Fananganana fantsom-by mahazatra Iron Iron: IEC60034-7 Arovy ny kilasy mihidy: IP55 (IEC60034-5) Kilasy insulation F. ambient maximum 40 ℃. Altitude≤1000m asl Fomba fampangatsiahana: IC411 (IEC60034-6) Fitaovana serivisy karazana indostrialy ...
MY Series Single Fampahan-dàlana miorina-môtô induction
MY Series Single Phase Capacitor-Run Induction Motor FIATURES MOTOR: fonosana IP55, IP54 azo alaina amin'ny fangatahana Class F insulation 230 / 400V, 400 / 690V, 50 / 60HZ tariby avo lenta manerantany Varnum impregnation ho an'ny insulated tropic proof insulation mitohy SI asa indostrialy karazana anton-draharaha fanompoana bearings baolina mavesatra ny tanjaky ny vy vy mifandanja Rotors voalanjalanja karazana S1 (adidy mitohy) miaraka amina maridrefy ampy mba hahazoazana ireo tombon-tsoa ho an'ny mpividy: CE Certified, ...
IE1 motera fahombiazan'ny dingana telo
Motera-motera haingam-pandeha IE1 dingana telo lehibe: Endri-javatra maodely: H56-H160 Aluminium / H80-H400 Cast Iron Rate Power Range: 0.06KW - 315KW (50hz / 60Hz) Fahombiazan'ny IE1. TOSIKARATRA: 220 / 380V 、 380 / 660V 、 230 / 400V 、 400 / 690V （Misy namboarina） Misy naoty avoakan'ny vokatra sy ny haben'ny endriny mifanaraka amin'ny fenitra IEC60034. Fitaovana an-trano: Fanamboarana fenitra Aluminium: IEC60034-7 Arovy ny kilasy mihidy: IP55 (IEC60034-5) Kilasy insulation F. ambient maximum 40 ℃. Altitude≤1000m asl Cooli ...
400W ~ 1100W Paompy anaty rano azo alentika tsy misy rano